Inona ireo singa fototra mifandraika amin'ny SEO sy ny orinasa mpanamboatra Internet?
Indro ny zavatra rehetra ilainao hahafantarana ny momba ny SEO sy ny orinasa mpanamboatra Internet. Raha mandinika ny fifamoivoizana organika indrindra, matetika ireo mpandraharaha amin'ny aterineto matetika dia manao tsirambina ny fikarakarana fikarohana mba hampifantoka ny ezak'izy ireo amin'ny ankapobeny amin'ny endriny. Amin'izany fomba izany, ny fampielezan-keviny dia ho toy ny hazakazaka amin'ny tongotra hazo. Raha ny marina, raha mitady vondron'olon-tsotra iray ianao mba hiatrehana ny fampiroboroboana amin'ny aterineto amin'ny orinasanao, inona ireo singa fototra mifampiraharahan'ny SEO sy ny orinasa mpanamboatra Internet? Raha ny marina, tsy ho tianao ny hiverina any am-piandohana ary handoa vola be dia be ary hiasa indray.
Noho izany, avelao ny zavatra tokony hikambana amin'ny seo SEO sy ny orinasa mpanamboatra Internet mba ahazoana antoka fa mandeha tsara ny tetikasan'ny orinasa manaraka, manalavitra ireo fandrika mahazatra indrindra. Ny zava-misy dia ny asa fanorenanao eo amin'ny tranokalanao dia tokony ho ampahany manan-danja ao amin'ny tranonkalanao amin'ny ankapobeny. Tsy misy toerana tavela ho an'ny fitsaboana hafa rehetra. Midika eto aho fa ny tranokala misy anao dia tsy azo atao "simba" na "voaolana" miaraka amin'ny SEO. Tokony ho azonao ity hadisoana ity, ary ny tetikasan-tserasera an-tserasera dia tsy mahavita manatanteraka ny tanjon'ny fandraharahana ataonao amin'ny ankapobeny.
Ny fananganana tranokala SEO mahafinaritra izay manome tombontsoa lehibe ho an'ireo mpampiasa dia mila fandaminana tsara sy drafitra henjana tsara mba hametrahana ny vokatra na ny serivisy eo anoloan'ireo mpihaino marobe amin'ny fomba tsara indrindra. Ireto ny fototry ny sehatr'asa SEO rehetra sy ny orinasa mpanamboatra Internet, voalohany indrindra:
Ny tranokalanao dia tokony handehandeha manodidina ny drafitra ara-barotra amin'ny internet. Tsy maintsy hisy ny zava-drehetra - manomboka amin'ny modely ara-barotra madio sy mazava, ho an'ny fitaovana ara-barotra manokana sy ny soso-kevitra marim-pototra.
Fidio ny sehatra tsara indrindra, ahazoana antoka fa misy dikany ny anaran'ny sehatra ary manan-danja eo amin'ny sehatry ny fandraharahana eo amin'ny orinasa. Tokony hanondro tsara ny tranokalanao maintimainty ny fifehezanao sy ny votoatiny. Mandritra izany fotoana izany, tena ilaina ny manery azy ireo hatrany amin'ny dikan-tsoratra tokana amin'ny tranokalanao. Tsy ho voafitaka velively raha ny soso-kevitrao SEO na web design dia manome soso-kevitra amin'ny anaran'ny sehatra midadasika amin'ny teny fototra. Amin'ny tena fiainana, afaka manome fialofana kely fotsiny izy, ankoatra ny tetikasa eo an-toerana ihany.
Sariho ny sainao rehefa misafidy ny rafitra fitantanana content content. Ny tetikady ao amin'ny votoatinao dia tokony hifanaraka tanteraka amin'ny tanjonao lehibe, fa tsy ireo izay tiany amin'ny SEO na orinasa mpanamboatra Internet. Ireto misy sosokevitra sasantsasany momba ny votoatinao:
Ny fahatsiarovan 'ny mpampiasa (lahatsoratra bilaogy, toro-làlana azo antoka, lahatsoratra feno, tranonkala mahasoa sy FAQ);
Considerable contexts (toro-hevitra, mpampianatra, fanadihadiana, vokatra na serivisy, fampiharana, ary fisehoana);
Fivoarana sy tarika fitarihana (fisedrana maimaim-poana na fanadihadiana, fanavaozana ny mpanjifa, tantara mahomby, fijoroana vavolombelona marina avy amin'ny mpanjifa sambatra, sns.).
Eritrereto ny fampiasana ny tranonkalanao ho toy ny fifandanjana amin'ny SEO ara-teknika, web design, ary ny navigateur ao anaty pejy. Midika ve ny fametrahana ny tranonkalanao miaraka aminao dia tokony ho ao an-tsainao ny filàn'ny mpampiasa anao sy ny fototry ny fikarohana fikarohana ho an'ny tanjon'ny fanoratana. Amin'io fomba io, ireto no hevi-bala lehibe tokony ho raisina ho an'ny orinasa SEO sy ny orinasa mpanamboatra tranonkala:
Layout manokana momba ny fitazonana haingam-pandeha haingana indrindra;
Sehatr'ilay fanorenana tranonkala ahafahana maneho ny singa tsirairay ao amin'ny pejy mahafantatra ny maha-zava-dehibe azy;
Ny toerana, ny pejy fandraisana, ary ny tranonkala rehetra dia tokony ho mazava tsara ho an'ny rehetra - ireo mpampiasa anao tena izy ary mitady mpitsikilo;
Safidy azo antoka sy tsara toerana hitadiavana tranonkala ho an'ny traikefa tsara kokoa, ary ny tanjon'ny fanoroana;
Modely ho an'ny fakantsary izay mamorona mora sy haingana amin'ny fitaovana portable;
Entana maivana, izay tokony ho azo ampiasaina ary hamenoana araka izay tratra.
Miverena amin'ny endriky ny indexation, avelao hiatrika izany - ny "crawlers" dia mila "mamaky" ny votoatin'ny pejy ary "mahatakatra" azy amin'ny endriky ny endriny makà fanapahan-kevitra mifototra amin'ny toerana misy ny tohatra ao amin'ny tranokala ao amin'ny lisitry ny SERPs Google. Ary izany dia tokony ho fantatry ny SEO rehetra sy ny orinasa mpanamboatra Internet noforonina araka ny tokony ho izy ho fanolorana. Midika izany fa ny laharam-pahamehanao ho an'ny pejy voalohany dia tokony homena amin'ny votoaty mifototra amin'ny lahatsoratra ankoatra ny endriky ny pejy na ny fanaraha-maso.
Mazava ho azy fa hanana pejy vohikala misy sary, tahiry PDF, horonan-tsary, na haino aman-jery hafa ho an'ny mpampiasa iray tsaratsara kokoa ianao, ary ny fomba fijery tsara. Na dia eo aza ny fahatanterahanao ny endriky ny tranonkalanao rehetra, dia aza hadino ny hilaza ny motera fikarohana amin'ny fiteny mazava momba ny singa rehetra hita ao amin'ny pejinao.
Indray mandeha indray - tsy misy farafahakeliny ny fanatsarana sary ny boot crawling dia tsy afaka mahita ny lanjan'ny liona amin'ny votoatiny hita maso. Aza milaza fa ny sary, ny horonan-tsary, ary ny PDF dia azo ampiasaina ho loharanom-pifandraisana azo antoka. Ankoatra izany, dia mety ho fotoana iray manokana ahafahana mampiditra teny fohy fanampiny na fehezan-teny lava ho an'ny safidy tsaratsara kokoa ahafahana miseho eo amin'ireo valin'ny fikarohana.
Ireto ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny fanatsarana ny sary. Ny dingana dia ara-teknika tsotra. Midika izany fa tsotra ny zava-drehetra - mitazona fotsiny ny zava-drehetra mamaritra, manan-danja, ary misoroka ny spam na ny fandeferana. Ity ny lisitry ny bala amin'ny sary SEO ampiasain'ny orinasam-panorenana rehetra:
Ny anaran'ny anarana dia tokony hanome ny famaritana mazava sy mazava tsara amin'ny sary tsirairay;
Alt tag texts dia tokony hanome ny famaritana sary hafa mba ho takatr'ireo "jamba" manapotipotika bots, manamafy ny mombamomba ny votoatin'ny votoaty sy ny lanjany maotina;
Ataovy sary tsara kokoa ny fampisehoana media sosialy amin'ny fampiasana OpenGraph na fitaovana hafa an-tserasera azo aleha;
Ampitahao ny haben'ny sary mba hiantohana ny fandefasana haingana sy ny haingam-pandeha haingana indrindra, tsy hanangona ny rakitra amin'ny vidin'ny fahitana azy;
Ho an'ny rafi-tranonkala tsara kokoa sy ny fampidiran-drivotra malefaka, aza hadino ny mampiditra ny sary rehetra natsangana ao amin'ny tranonkala ho an'ny sitemap XML anao.
Amin'izany fomba izany, aoka ho azo antoka fa ny votoatin'ny pejy (farafaharatsiny ny ampahany manan-danja indrindra) dia mora hita hatrany, mazava tsara ary manana endrika mahafinaritra ao amin'ny tranokala fototra anao. Miainga amin'ny fomba tsara izay mahatsapa izany - manadino ireo endrika ara-teknika loatra ao amin'ny SEO ara-teknika na fitaovana amin'ny tranonkala. Manao fanamarinana indroa amin'ny fahombiazan'ny tranonkalanao, misy ny fotoana tokana ahafahanao manadino izany amin'ny lafiny iray Source .